Vula umnxeba · Ukunyukela phezulu - AmaBhunga aSondeleyo amaBali aThintelweyo · Oyoun | Inkcubeko entsha yokucinga
kunye noMaiada Aboud
Ndifuna ukukumema ukuba uphonononge i-Ascension-imizimba esondeleyo yamabali afihliweyo: umdlalo, othetha ngebali lam, ibali lakho, amabali ethu. Mhlawumbi le ikwayindlela yakho yokuvakalisa intlungu yakho.
I-Ascension ngumdlalo malunga nezinto eziyimfihlo zobufazi kunye nokuya exesheni. Umdlalo ujolise ekubandakanyeni abathathi-nxaxheba ngeprojekthi yoluntu ukuze babonakalise imiba yamalungelo alinganayo kunye notshintsho kwezentlalo. Le projekthi iza kuvavanya ukuba sexesheni, iitabo, kunye nesazisi kuzo zonke iindlela ezinokubakho ezinje ngembali yezopolitiko, ezopolitiko, eziqulathwe, inkcubeko, inkolo, ezentlalo, ezempilo kunye neenkxalabo zobugcisa.
Sifuna i-womxn enomdla wokuthatha inxaxheba kuthotho lweeworkshop ejongene nobufazi kunye neentlungu, ezinokuthi zikhokelele kwisiphumo sokugqibela somdlalo weqonga (ukusebenza kweyure enye).
UGqr. Umsebenzi kaMaiada Aboud ujongana neendlela zonxibelelwano nezenkolo ezinxibelelana kunye nefuthe lomntu. Uzalelwe ePalestine (i-Arab yama-Israeli), waphumelela kwiDyunivesithi yaseHaifa, kwaye wafumana imfundo e-UK: iiMasters kwiYunivesithi yaseCoventry, kunye nePhD kwiYunivesithi yaseSheffield Hallam. Izifundo zakhe zizama ukudibanisa uhlalutyo lwenkcubeko yentlalo kumava omntu ngendlela yokusebenzisa intsebenzo kunye nokunxibelelana nobomi benkcubeko nezentlalo. Injongo kukudibanisa intsebenzo yobuqu kunye nokuzazisa kwenkcubeko. (Ndwendwela iwebhusayithi yakhe ngolwazi oluthe kratya)
Isini, ukuya exesheni, ubufazi vs. ubudoda, ubuchule ngokuchasene ukuthobela, ukusebenza njengonyango, ubugcisa bonyamezelo, ukunciphisa umzimba, isazisi senkcubeko.
Iworkshop / ukuzilolonga
Iindibano zocweyo / zokuziqhelanisa ziya kuqala ngoJanuwari 2021 kwaye ziya kubonelela ngendawo ekhuselekileyo yokunxibelelana nobufazi, iintlungu, unyango, kunye nokuthethathethana ngokudibeneyo kunye neengxoxo nabanye abantu basetyhini. Kuyo yonke iprojekthi, uyakuba nethuba lokuzibandakanya neenkcazo-ntetho kunye neenkomfa ze-intanethi / iingxoxo malunga nemicimbi yesini kunye neetabo. Nangona kunjalo, le projekthi ijolise ekwakheni ingxoxo yoluntu malunga nezo taboos kunye neekona zomzimba ezingavumelekanga. Kuxhomekeka kukhetho lwabantu, oomasifundisane baya kuba buqu e-Oyoun okanye kwiiseshoni ezikwi-intanethi.
Uphicotho-zincwadi: 1.12.2020 - 31.12.2020 eOyoun okanye kwi-Intanethi
Buya utsale umnxeba: kwi-1.1.2020
Oomasifundisane / Ukuzilolonga kwakhona: Iiyure ezingama-1-2 / iveki, 10.1.2020 - 30.2.2020 eOyoun eBerlin
Imbuyekezo: Ngokwentsebenzo, kuya kubakho intlawulo enye ye- € 100.
U ku velisa: UGqr. I-Maiada Aboud ngokusebenzisana ne-Oyoun
Ukuba unomdla wokuphicothwa, nceda uthumele i-imeyile ku-Maiada Aboud: drmaiadaaboud (at) gmail.com.
** Umhla obekiweyo = 31.12.20 **
Le projekthi yinxalenye yokugxilwa kwe-Oyoun kwikharityhulam okuqhubekayo: IITESHINI EZIMISELWEYO.